क्षेत्री–बाहुन, आदिवासी–जनजाति सबै सावधान -
३१ जेष्ठ २०७३, सोमबार १४:२३ June 13, 2016 wwwmophasalLeaveaComment on क्षेत्री–बाहुन, आदिवासी–जनजाति सबै सावधान
दिलकुमार यक्सो / हामी जनजातीहरू जातीय अस्तित्वबारे बढी नै संवेदनशील छौँ । आफ्नो जातीय अस्तित्वप्रति संवेदनशील र सकारात्मक हुनु उचित कुरा हो । तर कहिलेकहीँ त यो संवेदनशीलता ब्यर्थको हुनेमात्र होइन, हाम्रै उन्नतीको बाधक बनेर पनि आउँने गर्दछ । एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर पनि ‘चुच्चे’ र ‘थेप्चे’ को पूर्वाग्रहको बन्दी हुनजाँदा हामी त्यस्सै आफ्नो मन खराब बनाएर आपैmँलाई ठगिरहेका पो रहेछौँ । अति संवेदनशीलताले गर्दा विचार र बिवेकले काम गर्नुपर्ने विषयमा पनि हामी भ्रमहरूको काँडाघारीमा जाकिन्छौँ र आपूmलाई चिथोरिएको, बिनसित्तीमा रगत बगाउनुपरेको र अनाहकको पीडा बोकेर ‘किन रोइस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले’ भन्ने उखानले गिज्याएजस्तो भएर निस्कन्छौँ । मौकामा बुद्धि नपु¥याएर बल्ड्याङ् खाएपछि त्यसको दोष हामीले अरूलाई दिएर हाम्रो हित होस् कसरी ।
हामी जनजातीले क्षेत्री–बाहुनलाई वा उनीहरूले हामीलाई उपेक्षा र इष्र्या गर्नुपर्छ भन्नेजस्तो प्रवृत्ति र परम्पराको विकास भइरहेको छ । जनजातिले क्षेत्री–बाहुनलाई वा उनीहरूले हामीलाई शत्रुताको आँखाले हेरेर कसको भलाइ हुन्छ र रु के जनजाती वा पुरेत वा सिपाही हुनु भनेको ठूलो चित्त नै बनाउनु नपर्ने रु राष्ट्रिय परिकल्पना र सपना बोकेर हिँड्नु नपर्ने रु आफ्नै जातीभित्र कुपमण्डूक भएर विश्व नै यही कुवा हो भन्ने अनर्थको टरटराहट कराईरहनु पर्ने रु एउटै देशमा बसेपछि सामाजिक र राष्ट्रिय भावना आपूmभित्र जगाउन सक्नुपर्छ । विषयवस्तुलाई तुलनात्मक ढङ्गले हे¥यो भनेमात्र सत्यको निष्कर्ष पाइन्छ । सत्य पचाउन गाह«ो छ । किनभने सत्यको स्वाद नमिठो हुन्छ ।
अँ, तुलनात्मक ढङ्गले हेर्नैपर्छ १ हामी जनजातीले क्षेत्री–बाहुनबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । त्यसो त सिक्ने कुरै नभएको रित्तो त हामी पनि कहाँ हौँ र १ हामी जनजातिहरूले एउटा भैँसी देख्यौँ भने यसमा कति मासु होला भनेर त्यसको मासुतिर ध्यान दिन्छौँ । एउटा बाहुन वा क्षेत्रीले त्यही भैँसी देख्यो भने यो भैँसीले कति दूध दिन्छ होला भन्ने सोचेर दूधतिर मन लैजान्छ । एउटा थोरे ९ब्याउने उमेरमा पुगेको भैँसी० क्षेत्री–बाहुनहरूले पाए भने त्यसलाई ब्याउने बनाउनतिर कोशिश गर्छन् । हामी जनजातिहरू काटेर मासु ब्यापार गर्ने योजना बनाउँछौँ । क्षेत्री–बाहुनहरू घरमा गाई–भैँसी पाल्छन् र छोराछोरीलाई दूध खुवाउँछन् । हामी जनजातिहरू घरमा अन्नलाई कुहाएर जाँड–रक्सी बनाउँछौँ । एक त त्यसको गन्धले नै हाम्रा ससाना नानीहरूको कलिलो दिमागमा नजानिँदो असर पारिरहेको हुन्छ । क्षेत्री–बाहुनहरू घरमा भित्रिएको अन्न जोगाएर बेच्नतिर लाग्छन् । त्यसैले जनजाति बस्तीमा क्षेत्री–बाहुनको बस्तीमा भन्दा छिटो अनिकाल लाग्छ ।
मेरो घरभन्दा एक घर माथि खतिवडा बाहुनको घर छ, जसलाई हामी डाँडाघरे बाजे भन्छौँ । डाँडाघरे बाजे र हामी मंसिरमा बराबरी अन्न भित्य्राउँछौँ त्यस्तै ७०र७० मुरी । तर हाम्रो घरमा चैत सकिन नपाउँदै अन्नको अभाव देखापर्न थाल्छ । डाँडाघरे बाजे परिवारलाई खुवाएर बेच्न मात्रै होइन, हामीलाई पैँचो चलाउन पनि भ्याउँछन् । अब मेरो घरमा बोजुले जाँडरक्सी बनाएको दोष म के तिनै डाँडाघरे बाजेलाई दिऊँ रु उनी अगाडि बढेका भनेर आपूmलाई पछाडि पारेको भन्दै हिँडौँ ? जनजाति बन्धुहरूले नरिसाउनु, म यहाँ सच्याउनुपर्ने हाम्रा कतिपय दोषी मनोवृत्तिलाई औँल्याइरहेको छु । सत्य लेख्दा रीसाइहाल्नुभयो भने म के गरौँ, सत्य पचाउन नसकेर रिसाइरहनु होस् ।
क्षेत्री–बाहुनका ससाना छोराछोरी दूध पिउँछन् र संस्कृत पढ्छन् । त्यसैले तिनीहरूको दिमाग सानैदेखि तिखारिँदै र जिब्रो फट्कारिँदै आउँछ । हाम्रा छोराछोरीहरू जाँडरक्सीको गन्ध सुघ्न बाध्य हुन्छन् । कोही त सानैदेखि जाँडरक्सी खान्छन् । त्यसैले हाम्रा नानीहरूको जिब्रो सानैदेखि लट्पटिँदै आउँछ, दिमाग बोधो हुँदै आउँछ । क्षेत्री–बाहुनका घर–परिवारमा छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने शिक्षाको महत्व निकै सशक्त छ । केही नभएका लुरे बाहुनले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई गाँस काटेर भएपनि पढाउनतिरै लाग्छन् । धेरै गरीब बाहुन केटाहरू संस्कृत विद्यालयको सिदा खाएर, अर्काको घरमा भान्से बसेर वा पूजारी भएर पनि पढेका छन् । तर जनजातिका परिवारमा छोरालाई अलिअलि पढाएर पाएसम्म ब्रिटिश–गोर्खा फौजमा, नपाए भारतीय सेनामा भर्ना हुने ध्यान रहन्छ ।
बीचैमा पढाइ छोड्नेमा क्षेत्री–बाहुनका छोराछोरी होइन, जनजाति र दलितका छोराछोरीहरूको संख्या धेरै छ । यो लेखकका कुरा पत्याउनुहुन्न भने तथ्याङ्क मगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ । हामीलाई कसले स्कूल नजा, नपढ भनेको छ रु कसैले बाटो छेकेको छ रु के स्कूल र त्यहाँका मास्टरले जनजातीका छोराछोरी पढाउँदैनौँ भनेको छ रु ‘जसले सक्ला पढ्नलेख्न उसैले सक्छ अघि बढ्न’ भन्नेमा हाम्रो ध्यानै छैन, विश्वासै छैन । अनि जहाँ पनि क्षेत्री–बाहुन भनेर रीस गरेर केही पाइन्छ त रु घरको खानपान र चालचलनले नै क्षेत्री–बाहुनका छोराछोरीको दिमाग तेज छ । लोकसेवा आयोगले एउटा सूचना निकालेर ‘लौ, लिम्बू भाषामा लोकसेवाको परीक्षा दिनेलाई १०अङ्क थपिदिइने छ’ भन्यो भने क्षेत्री–बाहुन केटाहरू सुनवार भाषा सिकेर लोकसेवाको जाँच दिई पास हुन्छन्, त गरिखानेले जित्छन् । हामीले नाकका टुप्पामा रीस बोकेर केही लछारपाटो लाग्दैन ।
हामी जनजातिका भाषाहरू आपैmँ फैलाउन चाहँदैनौँ । सानाको कुरा हो, मेरो एकजना साथी कार्की थरको थियो ९अहिले पनि छ० । उसले मसँग लिम्बू भाषा सिक्न खुब कोशिश ग¥यो । तर मलाई मेरा बाउले के भन्नुभयो भने ‘तेरो साथी त्यो क्षेत्री केटोलाई आफ्नो बोली ९भाषा० नसिकाउनु । यी खस–बाहुनहरू ज्यादै चलाक हुन्छन् । तिनीहरूले हाम्रो बोली बुझेर हाम्रो आन्द्राभुँडी थाहा पाउँछन् ।’ त्यसैले उसले हाम्रो भाषा सिक्न पाएन । हामीले यस्तै संकीर्णता लिनाले हाम्रा भाषा संकटमा परेका छन् । नेपाली भाषामा हिन्दी, अँग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी भाषाहरूबाट आगन्तुक शब्दले आफ्नो स्थान बनाएका छन् । तर नेपाली भाषामा काम गर्ने हामी जनजातिहरूले त्यो भाषामा आफ्ना शब्द घुसाउन नसकेको दोष अब हामी कसलाई दिउँ ?
अर्कातिर हामी जनजातीलाई क्षेत्री–बाहुनहरू मान्छे नै होइन भन्ने भावनाले ब्यवहार गर्दछन् । उनीहरू आपूmलाई ठूलो जातको ठान्दछन् र हामीलाई सानो जातको भनी भेदभाव गर्दछन् । उनीहरू हामीलाई आफ्नो समुदायमा प्रवेश गराउनै चाहँदैनन् । ब्यवहार गर्नुप¥यो भने परै राखेर ब्यवहार टुङ्ग्याउँछन् । संस्कृत शिक्षा हामी जनजातीले पढ्नु हुँदैन भनेर वञ्चित गर्दछन् । मलाई थाहा छ, संस्कृत समृद्ध भाषा हो । त्यसमा साहित्य, कला, दर्शन, मात्र होइन, औषधि विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान आदि अनेक विधाका उपयोगी ज्ञान लेखिएको छ । त्यो म पढ्न चाहन्छु । तर मतवालीलाई संस्कृत पढ्न दिनुहुँदैन, वेद सिकाउनु हुँदैन भन्छन् ।
हामी जनजातिमा जडीबुटीको ज्ञान तुलनात्मक रूपमा निकै छ । त्यो ज्ञान र प्रतिभाको सदुपयोग हुनपाएको छैन । त्यसैले अबदेखि मिलेर बसौँ । जनजातिको शत्रु तागाधारी वा खस–आर्य होइन, गरिबी, अशिक्षा, अरौटेपन, भरौटेपन, कुरौटेपन र पछौटेपन हो । हामीभित्रको कुसंस्कृति, कुप्रवृति र खराब नियत हो । अब यी सबै विकृतीलाई निर्ममताका साथ त्याग्न एक अर्कालाई सहयोग गरौँ । आपूmमा भएका ज्ञानहरू पैmलाऔँ । यो अल्पसंख्यकहरूको देश हो । अल्पसंख्यकहरूको मुलुकका जातिहरू आपसमा जुधे भने कुखुराको खोरमा श्याल पसेजसरी विदेशी पस्छ । क्षेत्री–बाहुन, आदिवासी–जनजाति सबै सावधान!
सीमान्तकृत महिलाका लागि ६ जिल्लामा परियोजना
१५ चैत्र २०७२, सोमबार २३:३२ March 28, 2016 wwwmophasal
भरतको तेस्रो म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक
१६ चैत्र २०७२, मंगलवार ००:१२ April 3, 2016 wwwmophasal
पर्वत सेवा समाजको साधारण सभा तथा दर खाने कार्यक्रम सम्पन्न
३ भाद्र २०७४, शनिबार २१:२१ August 19, 2017 wwwmophasal